Edgar Allan Poe Biography uye Akanaka Mabhuku | Zvazvino Zvinyorwa
Patinopinda nechikepe zvinotyisa kana sainzi mabhuku enganoVashoma vanorangarira chokwadi chekuti kwaimbove nemunyori akashinga kuyambuka mimwe miganhu uye kubheja pane yakasarudzika genre munguva yeshanduko huru yekunyora. Kunyangwe paine hupenyu husina mukurumbira, American Edgar Allan Poe anoramba achidaro chirevo chetsamba dzakashata uye nyaya pfupi pamwe nemuenzaniso wevanyori vese avo vakamboshinga kurarama chete kubva mungano. Ngatifambe nenzira Edgar Allan Poe biography uye akanakisa mabhuku kuitira kuti uzive zvakavanzika zveiyi rima wizard.
2 Akanakisa Edgar Allan Poe Mabhuku
2.1 Arthur Gordon Pym Rondedzero
2.2 Mboro nhema
2.3 Iyo Ndarama Bug
2.4 Iyo Raven
2.5 Pedzisa nyaya
Akazvarwa muBoston muna Ndira 19, 1809, Edgar Allan Poe akabhabhatidzwa mushure memunhu anoonekwa munaWilliam Shakespeare's King Lear. Mushure mekutiza kubva kumba kwemhuri yababa vake apo Poe aingova negore rimwe chete uye kufa kwaamai vake kubva kuchirwere chetibhi gore rakatevera, Edgar akafamba pasi rose akatakura mufananidzo wevabereki vake seye chete ndangariro inooneka yekwakabva. Ipo hanzvadzi yake Rosalie yakatorwa naambuya nasekuru vake, Poe yakagamuchirwa nemuchato waFrances naJohn Allan, kubva kwaari waakawana dzidzo kuUnited Kingdom asati adzokera kuRichmond (Virginia) muna 1820.
Atova mumakore ake ekuyaruka, Poe airatidza hunyanzvi hwekunyora kunyora nhetembo kuna amai vewaunodzidza naye anonzi "Kuna Helen", akafunga rudo rwake rwekutanga rukuru. Pakati peiyi nhanho, iye mwana akasviba aivandudza kusagadzikana uye hunhu hunhu uyo ​​akawana mune zvinyorwa kana kwake kwemapepanhau vavariro nzira yekuwana simba pamusoro pevamwe vanhu vaakange achizviparadzanisa navo. Nechekare mumazuva ake ekuyunivhesiti, hunhu ihwohwo hwakaguma hwatsanangura murume aizvitenda kuti ane ruzivo rwepamusoro kunyangwe paine chimwe chinhu chakanyanya kukosha. Chido chingadai chakadzikira baba vake vekurera pavakatadza kubhadhara zvikwereti zveiye mudiki Poe uye akazopedzisira asiya zvidzidzo zvake kuti anyore semusoja muBoston. Munguva yebasa rake remauto, akanyora mabhuku maviri enhetembo, achiteverwa nechetatu, akabhadharwa nevamwe vake, iyo yakaburitswa muNew York, uko Poe akatiza chinzvimbo chake chemauto kuvaka basa semunyori.
Muchokwadi, Poe yakave munyori wekutanga uyo akatanga kurarama chete kubva mungano, chinangwa chakaomarara mumakore gumi a1830 akatambudzwa nedambudziko rezvehupfumi rakakanganisa chikamu chemabhuku. Pashure kuhwina mubairo wenyaya yake pfupi Nyaya yakanyorwa mubhodhoroPoe akatamira kuBaltimore, kwaakaroora hama yake Virginia Clemm, aingova namakore gumi nematatu chete. Akasiyiwa nhaka kubva kuhupfumi hwababa vokurera avo hukama hwaizoratidzira kushomeka kwakaoma kwakaedzwa naPoe kuripa zvishuwo zvake zvekunyora, akatanga kunyora mupepanhau reRichmond iro kutenderera kwacho kwakawedzera nekuda kwemukurumbira wemunyori, ongororo yake uye yake Gothic ngano genre ipapo isingazivikanwe kuMadokero. Zvisinei, kare panguva iyoyo matambudziko ake nedoro zvaizivikanwa.
Mumakore akatevera, Edgar Allan Poe akabatanidza nguva dzekugamuchirwa kukuru uye kushoma: kubva pakurambwa kwemuparidzi weNew York kuenda kwake ipfupi nyaya anthology Ngano dzeiyo Folio Kirabhu tichifunga iyo isiri-yekutengesa fomati panguva iyoyo, kusvika kumwedzi vachiva nenzara mupenjeni muPennsylvania kana kusimudzira kwenyaya yemapurisa muGraham's Magazine, iyo yaibvumidza mhuri kurarama imwe yenguva dzayo dzehupfumi dzakapfuma.
Zvisinei, kufa kwaVirginia kubva kuTiberculosis muna 1847 kwakapinza Poe mukushushikana kwakanyura muropa uye laudanum zvaizopedza hupenyu hwake muna Gumiguru 3, 1849, zuva rakanyorwa nemunyori Akawanikwa mune mamiriro e delirium mumigwagwa yeBaltimore maawa mashoma asati afa.
Akanakisa Edgar Allan Poe Mabhuku
Tisati taenderera mberi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti rinenge rese basa raPoe rakavakirwa pane nyaya, nyaya dzaive dzinoverengeka panguva iyoyo uye dzakabatanidzwa mune dzakasiyana zvinyorwa mukati memakore anotevera. Neiyi nzira, isu tinoongorora akanakisa mabasa emunyori kuburikidza nenyaya dzake uye yake yega novel sezvakadaro.
Arthur Gordon Pym Rondedzero
Edgar Allan Poe inoverengeka chete Yakaburitswa zvishoma nezvishoma muna 1938, zvichikonzera rimwe remabasa emunyori anoshamisa. Zano rinotitora isu kuenda kunyanza dzose umo Arthur Gordon Pym anowira kuburikidza nemugungwa whaler Grampus. Kuteedzana kwemutinies uye kuputsika kwechikepe kunopedzisira kwaendesa protagonist kutsvaga mhinduro, aneta nekuvapo kwake, munzvimbo dziri kure uye dzakasurukirwa dzeAntarctica. Kufuridzirwa kwakachena kwevadzidzi vemunyori saLovecraft, inoverengeka inoenderera kuve imwe yenyaya dzePoe dzinonyanya kuratidza.
Ungada here kuverenga Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa.?
Yakabudiswa muna 1843 mune imwe nyaya yePhiladelphia Mugovera Manheru Manheru, Mboro nhema zvinogoneka Nyaya yakakurumbira yaPoe uye akatendeka anokonzeresa icho chakashata uye chakasviba chisiko. Nyaya yacho inotiendesa kumba kwevaviri vadiki vanogamuchira katsi, mhuka inourawa nemurume panguva yekudhakwa. Kuonekwa kwekitsi yechipiri kuchaderedza kuwirirana kwemhuri, zvichitungamira rondedzero kuenda kumhedzisiro inoratidza hunhu hwenyaya ino inoratidza chikamu chemamiriro ezvinhu akararama Poe nemanzwiro akadai sekutsamwa, huipi kana kutsamwa.
Iyo Ndarama Bug
Yakabudiswa muna 1843 muPhiladelphia Dollar Newspaper, Iyo Ndarama Bug inotaurira kusangana kweshamwari yaWilliam Legrand akasurukirwa nemuranda wake Jupiter pachitsuwa padhuze neCharleston uko kwavakawana mupumburu wakanyorwa wakaratidza nzvimbo yepfuma yepirate.
Iva chiratidzo chePoe zvakasikwa uye basa hombe rakamupa kuzivikanwa pasi rose, Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa. Nhetembo yakaburitswa muna 1845 muNew York Evening Mirror. Yakapihwa mweya wakashata uye mutauro wakashongedzwa, iro basa rinorondedzera kushanya kwegunguwe pahwindo remudiwa anochema, chiratidzo chekudzika kwemunhu mukuru mugehena chairo.
Kana iwe uchitsvaga anthology iyo inounza pamwechete chikamu chebasa raPoe, iro rake rake Pedzisa nyaya rakaburitswa naPenguin anounganidza kumusoro 72 mabasa emunyori, kusanganisira maumbirwo kuzvikamu zvake Ngano dzeFolio Club uye Ngano dzeGrotesque uye Arabesque, pamwe nenyaya nomwe dzisina kunyorwa muSpanish.
Ndeapi aunofarira mabasa ePoe?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Edgar Allan Poe Biography uye Akanaka Mabhuku
Kutaura naJavier Alonso García-Pozuelo, munyori weLa cajita de snuff